Akụkọ - Fiberglass Chopped Strand
Faiba glaasi Eberi eriri tinyere Chopped Strands maka BMC, Chopped Strands For Thermoplastics, Wet Chopped Strands, Alkali na-eguzogide ọgwụ Chopped Strands (ZrO2 14.5% / 16.7%).
1) .Chopped Strands maka BMC
Chopped Strand maka BMC dakọtara na unsaturated polyester, epoxy resin na phenolic resins.
The end-use applications include njem, ụlọ & ewu, electronic & eletriki, n'ibu, na ìhè ụlọ ọrụ.
2). Ejiri Strand maka Thermoplastics
Chopped eguzo maka Thermoplastic na-adabere silane njikọ n'ụlọnga na pụrụ iche sizing Nwa, dakọtara na PA, PBT / PITA, eyi, AS / ABS, PC, PPS / PPO, POM, LCP;
E-Glass Chopped Guzosie maka thermoplastic mara maka ezigbo iguzosi ike n'ezi ihe, ihe kachasị mma na nhazi ihe onwunwe, na-eweta ezigbo akụrụngwa akụrụngwa yana ogo dị elu na ngwaahịa ya emechara.
3.) Wet Chond Strand
Wet Chopped Strand dakọtara na polyester unsaturated, epoxy na phenolic resins na gypsum.
Wet Chopped Strand nwere oke mmiri ọdịnaya ma nyefee ọmarịcha mmiri, gụnyere mgbasa na mmiri na gypsum.
4.) Alkali na-eguzogide eguzogide Strands (ZrO2 14.5% / 16.7%)
M). Premix Alkali na-eguzogide eguzogide Strands – (ZrO2 14.5% / 16.7%)
Premix chopped strands bụ nnukwu alkali na-eguzogide ọgwụ iko eriri eriri Strand maka n'ozuzu ojiji zubere maka premixing na ihe ndị ọzọ na-emepụta site n'iji tamping mgbatị ma ọ bụ ndị ọzọ Filiks na a kpụrụ GRC akụkụ.
Ọbụna n'okpuru nnukwu ọgwụ ọnọdụ dịkwa mfe ijikọta, na mgbe agwakọtara ụyọkọ dị mma. Maka mmepụta nke ihe GRC dị ka paịpụ mmiri ma ọ bụ igbe akụrụngwa, ma ọ bụ ụlọ ọrụ dị ka bọọdụ mpempe akwụkwọ dị oke, ọdịnaya nke zirconia nke 16.7% obere yarn mepụtara nke ngwụcha ike nke arụmọrụ ka mma
II). Obere TEX Alkali na-eguzogide eguzogide Strands – (ZrO2 14.5% / 16.7%)
Low Tex chopped strands bụ nnukwu Intergrity, ala tex, alkali na-eguzogide, iko-fiber chopped strand maka ịkpụzi GRC mmiri na akọrọ mix usoro ma ọ bụ ndị ọzọ premixing Filiks. Enwere ike iji ya maka imepụta ihe eji arụ ọrụ n'ime ihe GRC ọkọlọtọ.
The pụrụ iche wetting gị n'ụlọnga usoro na-eme ka ọ dị mfe ngwakọta na ịnọgide na-enwe ezi iguzosi ike n'ezi ihe n'oge agwakọta, n'ụzọ dị irè na-egbochi eyi na ịnọgide na-enwe bundling Njirimara mgbe weere na akọrọ ihe. Yarn ndị nwere ntakịrị otu eriri nwere ike ime ka elu ala a kapịrị ọnụ jiri obere nsonye wee si otu a pụta, wee si otu a rụpụta nkwalite siri ike karị. Ngwaahịa a dabara adaba maka ịkwadebe ngwa agha na agba agba.
III). Mmiri gbasara Alkali na-eguzogide eguzogide Strands – (ZrO2 14.5% / 16.7%)
mmiri a chụsasịrị eriri eriri bụ nzube pụrụ iche alkali na-eguzogide iko eriri eriri, ejiri maka ịgwakọta simenti na ihe ndị ọzọ chọrọ mgbasa dị elu. Karịsịa maka ngwakọta apịtị pụrụ iche nke mgbakwasa ma ọ bụ maka mmiri mortar na mmepụta mmepụta ihe ndị ọzọ pụrụ iche.
Ngwaahịa sizing gị n'ụlọnga usoro bụ mmiri dispersible na, mgbe weere na mmiri, nwere ike zuru ezu-agbasasịkwa n'ime monofilaments. Ejiri ya na eserese na ngwakọta ngwakọta, yana site na usoro pụrụ iche iji mepụta ụfọdụ GRC ọkọlọtọ.